Sekoly Akatona Noho Ny Tsy Fahampian’ny Angovo ao Panama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2013 14:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, polski, 繁體中文, 简体中文, Español
Toy izao ny nanombohan'ny fitateran'ny Prensa Latina [es] izany haintany izany :
Miezaka ny hanemotra araka izay tratra ny fanapahana herinjiro izay mety hiteraka fatiantoka hatramin'ny 3,7 tapitrisa dolara isan'ora ny governemanta araka ny nitateran'ny Prensa Latina [es] azy:
Ivana Tejada (@IvanaTejada) [es], ohatra, mieritreritra fa tsy afa-nitsinjo ity krizy ity ny manampahefana ary tara loatra vao mihetsika ankehitriny:
@IvanaTejada [es]: Tsy mahavita mitsinjo, miandry ny firenena ho tratran'ny krizy fa manao zavatra henjana. Nomentsika fahefana izy ireo.
Jorge Yau (@mopx) [es] mieritreritra fa famonoana ny fampiatoana ny fampianarana, ary milaza fa azo atao ny mianatra tsy mila fitaovana mandeha amin'ny herinaratra :
@mopx [es]: Raha ny atoandro, ny hany fitaovana elektrika miasa ao an-dakilasy dia ny mpampifofo rivotra eny amin'ny valindrihana. Fa inona moa ny ilain'ny ankizy ankehitriny? iPad, Laptop, WIFI, sa seza fanaovana masazy?
Ho an'i Mery (@megirom) [es] tsy izy izany fampiatoana ny fampianarana izany ho fitsitsiana ny herinaratra, satria handany herinjiro any an-trano ny mpianatra.
@megirom [es]: Mazava be, satria ho any an-trano hamaky teny hohazavain'ny guaricha [*ao Panama, ny guaricha dia loharanon'hazavana tsotsotra, izay hazavain'ny kerozena] ny mpianatra .
Mitovy hevitra aminy i Oliver (OliverCh17) [es] ary mihevitra fa raha ny kajy tsotsotra dia ny fampiatoana ny fampianarana aza no miteraka fandaniana herinaratra bebe kokoa:
@OliverCh17 [es]: Kajy tsotra, mpianatra 30 miara-milalao ao amin'ny kilasy iray sa trano 30 ahitana ankizy mandany herinjiro bebe kokoa… LALINTSAINA!!!
Ho an'i Tito Herrera (@TitoHerrera) [es] tsy ny herinaratra ihany no voatsitsy amin'izany fa ny fanazavana ihany koa:
@TitoHerrera [es]: Fitsitsiana herinaratra hoy ny governemanta: “Amin'ny alalan'ny fanakatonana ny sekoly no hanakatonana ny saina ihany koa, izay midika hoe voatsitsy ny fanazavana” .
Ny marina dia hitombo io fepetra io ary efa nambara fa hisy ny fanapahan-jiro raha mbola tsy avy ny orana ao anatin'ny andro maromaro, araka ny tatitr'i La Prensa [es] :
Namelona fanantenana ny Panameana maro ny filatsahan'ny orana tany amin'ny faritra maron'ny firenena ny marainan'ny alakamisy 9 Mey 2013, fa nahazo vahaolana ara-boajanahary tsy nilàna fepetra faran'izay henjana ny krizy. Manazava ny TVN [es]: